उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा सहमतिको प्रयास जारी, को हट्दैछ पछि ? – सुनाखरी न्युज
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा सहमतिको प्रयास जारी, को हट्दैछ पछि ?
Posted on: November 9, 2020 - 11:26 am
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारणसभाका नजिकिँदै जाँदा प्रत्यउासी दुई उम्मेदवारवीच सहमति कायमगर्ने प्रयास शुरु भएको छ । यसकालागि महासंघका विभिन्न ब्यक्तिहरु लागि परेका छन् ।
साधारणसभाकालागि नयाँ मिति यही मंसिर ११, १२ र १३ गतेलाई तोकिएको छ । मंसिर ११ र १२ गते महासंघको साधारणसभा गर्ने र १३ गते नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका बनिसकेको छ ।
सोही कार्यतालिका अनुसार मंसिर ४ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम मिति तोकिएको छ । साधारणसभा र निर्वाचनको मिति नजिकिएको अवस्थामा महासंघभित्र पदाधिकारी चयनका लागि सहमतिको प्रयास हुन थालेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै महासंघभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीहरुको चयन सहमतिबाटै गर्नेगरी पहल थालिएको हो ।
यद्यपि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीका आकांक्षीहरुले आ–आफ्नो प्यानलमा चुनाव प्रचारलाई तीव्र तुल्याएका छन् । स्पष्ट दुई प्यानलमा विभाजित महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र अर्का उम्मेदवार किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा छन् । ढकालको प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, एशोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई र जिल्ला÷नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी चुनावी मैदानमा छन् ।
अर्का उम्मेदवार प्रधानको प्यानलबाट वस्तुगततर्फ अञ्जनकुमार श्रेष्ठ, एशोसिएटतर्फ सौरभ ज्योति र जिल्ला तथा नगरतर्फ दिनेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् । तर यसरी ध्रुवीकरणका साथ चुनावी भिडन्तमा जाँदा अन्ततोगत्वाः महासंघलाई फाइदा नगर्ने भन्दै यतिखेर सहमति खोज्ने अन्तिम प्रयास गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारद्वय ढकाल र प्रधान दुवै महासंघका लागि आवश्यक व्यक्तित्व भएकाले सहमतिमा नेतृत्व चयनमा जानुपर्ने व्यवसायीहरुको मत छ ।
त्यसो त यसअघि खुलेरै प्रधान प्यानलमा लागेका हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ५४औं साधारणसभापछि महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्ने शेखर गोल्छासमेत यतिखेर सहमतिको पक्षमा देखिएका छन् । केहीदिन अघिमात्र आफ्नो ट्विट वालमा सहमतिको संकेत गर्दै गोल्छाले लेखेका छन्, ‘प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव नै सर्वोत्तम तरिका हो । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघमा कुनै सहमति भएमा यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको लागि सुखद् हुने थियो । यो प्रयास जारी राखौं ।’
यता, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु समेत सहमतिको पक्षमा उभिदै अन्तिम समयसम्ममा भए पनि सहमतिको विन्दुमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदैछन् ।